Wararka - Farqiga u dhexeeya nabarrada adag iyo kuwa jilicsan ee madaxa cadayga
Isbarbar dhigburushyada adag ee cadayga leh, burushka jilicsan ee cadaygu waxyeello uma laha ilkaha waxayna ku guuleysteen macaamiil badan. Aynu si dhow u eegno farqiga u dhexeeya burushka caday ee adag iyo kuwa adag, iyo sida loo isticmaalo cadayga jilicsan.
Maxay ku kala duwan yihiin caday jilicsan iyo caday adag
1. Farqiga u dhexeeya caday jilicsan iyo caday adag
Farqiga ugu cad ee u dhexeeya burushka ilkaha ee jilicsan iyo burushka caday ee adag waa qaabka cufka. Burushka caday ee adag ayaa si fudud u dhaawici kara dhaldhalaalka dusha sare ee ilkaha. Intaa waxaa dheer, taxaddar yar ayaa sidoo kale dhaawici karta ciridka. Dadka badankood waxay u baahan yihiin oo keliya inay iibsadaan caday jilicsan. Laakiin si looga nadiifiyo wasakhda ka timaadda ilkaha, saamayntu waa isku mid haddii aad isticmaasho caday adag ama jilicsan. Waxa ugu muhiimsan marka aad cadayanaysid waa inaad ku cadayato ilkahaaga meesha saxda ah.
Intaas waxaa sii dheer, hadey tahay caday jilicsan ama adag, ku caday burushka si fiican u isticmaal kasta ka dib isticmaalkiisa, isla markaana rux qoyaanka inta ugu badan ee suurtogalka ah si aad uga dhigto mid qallalan oo nadiif ah.
2. Sida loo isticmaalo caday jilicsan
1. Burushka cadayga waa in lagu dhejiyaa xagal 45-digrii leh dusha sare ee ilkaha, loona dhigaa si jaantus ah oo si tartiib ah loogu riixaa is-goyska qoorta ilkaha iyo cirridka, si tartiib ah u caday ilkaha dhexdooda, oo aayarna u wareeji cadka.
2. Ha isticmaalin xoog badan markaad cadayato. Caday kor ilaa hoos markaad cadayaneyso ilkaha kore iyo hoos ilaa kor markaad cadayaneyso ilkaha hoose. Hore iyo gadaal caday, nadiifi gudaha iyo dibaddaba.
3. Waa inaad cadayato oo aad afkaaga luqluqdaa subaxdii iyo galabtii. Haddii ay suurtagal tahay, caday ilkaha isla markiiba cuntada kadib. Gaar ahaan waa muhiim inaad cadayato intaadan seexan. Caday ilkahaaga ugu yaraan 3 daqiiqo markasta.
4. Dooro cadayga saxda ah. Cadaygu waa inuu noqdaa caday daryeel caafimaad. Cirridku waa inay ahaadaan kuwo jilicsan, dusha burushkuna waa siman yihiin, madaxa burushku wuu yaryahay, baralkuna waa wareegsan yahay. Caday cadayga noocan ah wuxuu si wax ku ool ah u baabiin karaa huurada ilkaha isagoon wax yeelin ilkaha iyo ciridka
5. Burush kasta ka dib, dhaq burushka cadayga, madaxa burushka kor ugu qaad koobka, oo dhig meel hawo leh oo qallalan. Burushka cadayga cusub waa in la beddelaa 1 ilaa 3 bilood kasta. Haddii nuuradu kala firidhsan yihiin oo fooraraan, waa in lagu beddelaa waqtiga.